အစိုင်အခဲ Audioworks သည် NUGEN Audio ၏ Halo Upmix နှင့်အတူ Madden NFL 2018 အတွက်စွဲမြဲနေသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုရောနှောခဲ့သည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Crown Media သည် Crown Media Family Networks playout အတွက် Mediaproxy ၏နည်းပညာကိုရွေးချယ်သည်
Densitron သည် IDS ပလက်ဖောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရရှိစေသည်
အွန်လိုင်းပညာရေးအတွက်နည်းပညာကိရိယာများ - စာအုပ်အသစ်
Crystal Vision သည် M-PIP နှင့်အတူရုပ်ပုံသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်
ယခုအခါဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောအမေရိကန်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောပူးတွဲဒီဂျစ်တယ်နိုင်ငံသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့ - NAGRA အစီရင်ခံစာမှတွေ့ရှိရသည်
အာဂျင်တီးနားရှိ Grupo Express သည် NAGRA မှ Multi-DRM နှင့်အတူယခု Express OTT ဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်သည်
Brightline သည် LED SeriesONE ၏စတူဒီယိုအလင်းရောင်အမျိုးမျိုးအတွက်အရောင်အသွေးစုံလင်သောအပူချိန်၊ RDM ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးချဲ့သည်
ယူ (၁) သည် Xytech ၏ MediaPulse ဖြင့်အရင်းအမြစ်အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်
VEGAS Creative Software သည် VEGAS Pro 18 ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Cloud-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကျယ်ပြန့်သောအစီအစဉ်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြယ်ပွင့်များသည်ဂန္ထဝင်မက္ကဆီကန်ရုပ်ရှင်များပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် Cintel Scanner ကိုမှီခိုသည်
NiTRo သည် 8K Editing လုပ်ငန်းအသွားအလာ AJA ၏ KUMO 3232-12G 12G-SDI Router နှင့်အတူလုပ်ဆောင်သည်
ဇီဇီကစက်တင်ဘာမှာ“ ZIXI ပို့ဆောင်သူများ” ရဲ့ VIRTUAL SHOWCASE ကိုကြေငြာတယ်။
X2X Media Group သည် RAW ကိုဘတ်ဂျက်ဖြင့်ပစ်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုသည်
Clear-Com ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသည် High-Touch Headsets များအားသန့်ရှင်းရေးအတွက်ပစ္စည်းများအသစ်တင်ပေးသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » NUGEN အသံရဲ့ Halo Upmix နှင့်အတူက Madden NFL 2018 အဘို့အစိုင်အခဲ Audioworks ပေါင်းစု immersive Ambient အသံ
NUGEN အသံရဲ့ Halo Upmix နှင့်အတူက Madden NFL 2018 အဘို့အစိုင်အခဲ Audioworks ပေါင်းစု immersive Ambient အသံ
Edinburgh, ဗြိတိန်, ဇူလိုငျ 26, 2018 - သူတစ်ဦးအဖြစ် "ဘဝတွေကိုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအသံရှူရှိုက်" Will Morton, Solid Audioworks မှာတည်ထောင်သူနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးစွဲငြိဖွယ်ရာတေးသံတစ်ဦးကကစားသမားရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်သိတယ်။ Rockstar မြောက်ကိုရီးယားအဘို့ယခင်အကြီးတန်းသံကိုဒီဇိုင်နာနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကြီးကြပ်ရေးမှူး, Morton စျေးကွက်အပေါ်လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းအချို့များအတွက်အသံထုတ်လုပ်မှုပေး 2014 အတွက် Solid Audioworks တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အစိုင်အခဲ Audioworks အများဆုံးမကြာသေးမီကများအတွက်ရုပ်ရှင်အသံပေး က Madden NFL 2018 EA ၏အားကစားကနေ™အပေါ်မှီခို NUGEN အသံ'' s ကို Halo Upmix ဂိမ်းရဲ့နောက်ခံသံကိုသေချာစေရန်လက်တွေ့ကျကျနဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကစားသမားဖြစ်သည်။
"Halo Upmix မတိုင်မီကကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသော upmixers အများကြီးကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ရလဒ်နှင့်အတူအပြည့်အဝကျေနပ်မှုဘယ်တော့မှခဲ့ကြပါတယ်" ဟု Morton ကပြောပါတယ်။ "နောက်ဆုံးရောနှောအမြဲအတုနှင့်ညံ့ဖျင်းသောခံစားရတယ်။ Halo Upmix ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်သန့်ရှင်းတဲ့နှင့်သဘာဝတံပိုးမှုတ်သောအခါကြောင်းထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ရောနှောထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါထိုးထွင်းသိမြင် GUI ကိုမသိမသာအသေးစိတျကိုအာရုံစိုက်ကျနော်တို့စကားကိုနားထောငျခငျြတအတိအကျရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကို enabled ။ "
Halo Upmix မျိုးစုံမှတ်တမ်းတင်နည်းစနစ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏အဖွဲ့စည်းတဲ့တေးသံများအတွက်ချောမွေ့စွာရောနှောအာမခံ။ အစိုင်အခဲ Audioworks တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်အဖွဲ့သည်ဖဲ့ရှိရာတဦးတည်း "ရှုပ်ထွေး Foley" အခန်းတစ်ခန်း, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအဘို့အဦးတည်းယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် Foley / အသံကအခန်းနှင့်အတူ outfitted သည်ပုံမှန်ဘောလုံးဂိမ်း၏အသံတူအောင်ဖန်တီးရန်အမျိုးမျိုးသောတ္ထုထောင်းနှင့်ရိုက်ချိုး။ Morton လည်း off-site သည်အသံတစ်ခုအပိုလက်တွေ့ကျအလွှာများအတွက်ပြင်ပမှာနောက်ခံသံကိုဖမ်းယူဖို့ recordists ငှါး၏။
အဆိုပါဂိမ်း mode ကိုများအတွက်အသံအလုပ်လုပ်အပြင်, Solid Audioworks များအတွက်ရုပ်ရှင်ရောစပ်နှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည် က Madden NFL 2018: Longshot, ဂိမ်းရဲ့အဖွင့ ်. ဇာတ်လမ်း mode ကို။ အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းကြယ်ပွင့်စကားသံကိုသရုပ်ဆောင်များကိုအဆိုပါဂိမ်းလမ်းတစ်လျှောက်စေသည်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး NFL တန်းစီဇယားအပေါ်တစ်ဦးကိုစတင်အနေအထားအားမိမိအထက်တန်းကျောင်းအသင်းထံမှအသက်တာကိုမှလူငယ်တစ်ဦး QB ၏ခရီးဆောင်ခဲ့သဖြင့်, တစ်ခုကာတွန်းရုပ်ရှင်ဆင်တူသည်။
"ငါတို့သည်ငါတို့၏အဓိကထိန်းချုပ်ခန်း၌ထိုင်ရသောအခါကျနော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အသံနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်," Morton ကပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရုပ်သံလိုင်းအရေအတွက်နှင့်မိုက်ကရိုဖုန်း configurations နှင့်အတူမျိုးစုံနေရာများမှာကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများတှငျမှတျတမျးတငျထားခဲ့အသံဖိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုနေတသမတ်တည်း, ပြောင်းလဲနေသောရောနှောကိုခံခဲ့ရသည်။ "
Halo Upmix တစ်ဦးအော်ဂဲနစ်, တိကျရောနှောသို့, ဤဒြပ်စင်ထားခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော tool ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အလိုလိုသိထိန်းချုပ်မှုနှင့်အစွမ်းထက်, Real-time ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အတူ Halo Upmix Morton နဲ့သူ့အဖွဲ့ဂိမ်းနှင့် cutscenes နှစ်ဦးစလုံး၏အသံချီးမွမ်းရန်အရောနှောမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုရှုထောင့်-ညှိဒဏျကွေးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အပြည့်အဝသို့မဆိုတေးသံအသွင်ပြောင်းဖို့ဒီဇိုင်းအဖြေတစ်ခုထားရှိခြင်း, ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု Solid Audioworks ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းလဲနှင့်အတူချိန်ညှိကြောင်းနောက်ခံသံကိုဖန်တီးရန်သဘာဝကအသံနှင့် reverb သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
"Halo Upmix နှင့်အတူကျွန်တော်တစ်ဦးစည်းလုံးသံကိုဖန်တီးရန်အတူတကွသည်ဤဒြပ်စင်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်" Morton ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအမှန်တကယ်တစ်ဦးက 'box ကိုထဲက' 'အတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ Halo Upmix ပေါင်းစပ်ပြီးနောက်, ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်အတူတကွရောနှောချည်ထားသောကြောင့်တိကျတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်တစ်ဦးချင်းစီမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအပိုင်းအစကနေကျနော်တို့ဂိမ်းအတွက်ကစားသမားဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်နဲ့စစ်မှန်အတွေ့အကြုံကိုကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်သောအသီးသီးကိုတေးသံနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ "
မိမိအလုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ Halo Upmix ထည့်သွင်းကတည်းက Morton အပါအဝင်အခြား NUGEN အသံထုတ်ကုန်သုံးပြီးစတင်နေပြီ Stereoizer အသံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏မည်သည့်အဆင့်မှာသဘာဝအစတီရီယိုတိုးမြှင့်သည်။ Morton NUGEN ၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး "အဘယ်သူအားမျှမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒုတိယ" သူကပြောပါတယ်သူခြွင်းချက်နဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာအသံကိုဆက်လက်ရန်၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. မျှော်ကြည့်။
Halo Upmix နှင့် Stereoizer အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, NUGEN အသံရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်မိသားစုနှင့်အတူမှာရရှိနိုင် www.nugenaudio.com။ ရှိသမျှသည်အခြားသောမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလျ protected].
NUGEN အသံဟာအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်လည် upmixing နှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့အသံကျယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, မီတာနဲ့ content ရှာမှီးခြင်းမှပလေးအောက်ကိုမှ ဖြတ်. ဆုံးမပဲ့ပြင်များအတွက် Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်ပေးဆန်းသစ်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံ tools တွေကိုတစ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ NUGEN အသံဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုထင်ဟပ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်, အချိန်ချွေတာစရိတ်များလျှော့ချသဖြင့်, ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်သူကပိုမိုလွယ်ကူ High-အရည်အသွေး, လိုက်နာအသံမကယ်မလွှတ်စေ။ NUGEN အသံရဲ့အသံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကိရိယာများ, အသံကျယ်မီတာ / mastering ရောစပ်နှင့်ခြေရာခံခြင်းကမ္ဘာ့အသံလွှင့်အတွက်ထိပ်တန်းအမည်များ, Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တေးဂီတထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.nugenaudio.com.
NUGEN အသံ Follow:
: D ပုဂံဆက်သွယ်ရေး
: D ပုဂံဆက်သွယ်ရေးအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
TSL ထုတ်ကုန်များသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Virtual Training Programme ကိုစတင်မိတ်ဆက်သည် - သြဂုတ်လ 4, 2020
Sara Glaser, CAS နှင့်အတူအသံ Insight - ဇူလိုင်လ 29, 2020
Markertek နှင့် TecNec မှတစ်ဆင့် Studio Technologies ထုတ်ကုန်များကိုရနိုင်သည် - ဇူလိုင်လ 29, 2020
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း NUGEN အသံ လှံ & Arrows UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2018-07-26
ယခင်: IBC2018 မှာဆက်သွယ်ရေးဟန်ပြစီးပွားရေးေူပာင်းလဲရေးကိုမဟာဗျူဟာကိုမြင်ယောင်ကြည့်
နောက်တစ်ခု: ချီကာဂိုရဲ့စပိန်အသံလွှင့်စနစ်ဘူတာ MaxxCasting ™စနစ်နှင့်အတူ Key ကိုအိမ်နီးချင်းအတွက် ppm နဲ့ပရိတ်သတ်ရောကိုပိုကောင်းစေ
၂၀၂၁ ထုတ်လွှင့်မှုခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်လွှာများကို NAB Leadership Foundation မှလက်ခံသည်
NAB ဥက္ကPresident္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူ Gordon Smith
ရေဒီယိုမိတ္တူကူးခြင်းပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ NAB ထုတ်ပြန်ချက်
NAB ဥက္ကPresident္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Gordon Smith အပေါ် NAB မှထုတ်ပြန်ချက်